प्रदेश नं. एकका कुन जिल्लामा कति संक्रमित थपिए ? « Salleri Khabar
प्रदेश नं. एकका कुन जिल्लामा कति संक्रमित थपिए ?
३ भदाै, मोरङ – प्रदेश नं १ मा आज १२३ जना कोरोना सङ्क्रमित थपिएका छन् । सङ्क्रमण पुष्टि भएकामा ३३ महिला र ९० जना पुरुष छन् । सङ्क्रमित हुनेमा मोरङका ६७, सुनसरीका ३७, झापाका १६, पाँचथरमा एक र दुई भारतीय नागररिक रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै, विराटनगरमा आज ५२ जना सङ्क्रमित थपिएका छन् । सङ्क्रमितमध्ये ३२ पुरुष र २० जना महिला छन् । मोरङको रङ्गेलीमा पाँच महिला र चार जना पुरुष, बुढीगंगामा एक महिला एक पुरुष, कटहरीमा एक महिला, धनपालथान, कानेपोखरी र मिक्लाजुङमा एकएक पुरुषको रिपोर्ट पोजेटिभ देखिएको छ ।
प्रदेश नं १ मा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या दुई हजार ३५५ पुगेको छ भने आज दुई जना निको भएका छन् । दुवै जना मेची अञ्चल अस्पताल धाईजन आइसोलेसन केन्द्रबाट निको भएर घर फर्केका हुन् । कोरोनाबाट सङ्क्रमित भएका निको भएर घरफर्कनेको सङ्ख्या एक हजार १३५ जना पुगेका छन् । प्रदेश नं। १ मा आज एक हजार ९४१ जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएको छ । मङ्गलबार दुई हजार ६३१ जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएको थियो । हाल सम्म ७२ हजार ४३ जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।